सुविसु क्यान इन्फोटेक’ मेला सुरु, प्रवेश शुल्क १०० रुपैयाँ
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले ‘सुविसु क्यान इन्फोटेक–२०१७’ मेला आजदेखि सुरु भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ)को आयोजनामा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी..
टेलिकमले शुरु गर्‍यो फोर जी सेवा, प्रिपेडमा नचल्ने
Posted on Jan 01 2017
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बहुप्रतिक्षित फोर जी इन्टरनेट सेवा आजबाट बिस्तार गरेको छ । तर तत्कालका लागि एनटीसीको पोष्टपेड सेवामा मात्र यो सुविधा प्रयोग गर्न पाइनेछ । आज आयोजित कार्यक्रममा सूचना..
पहिलोपटक टेलिकमको फोर-जी सेवा आइतबारदेखि, तत्काल आइफोनमा नचल्ने
Posted on Dec 29 2016
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आगामी आइतबारदेखि नेपालमै पहिलोपटक चौंथो पुस्ताको मोबाइल डाटा सेवा ‘फोर-जी’ सुरु गर्ने भएको छ । अंग्रेजी वर्ष सन् २०१७ को अवसरमा काठमाडौं र पोखराबाट फोर-जी सेवा..
​नेपाल टेलिकमले ल्यायो १५ रुपैयाँको डे डाटा प्याक अफर
Posted on Dec 01 2016
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले डे डाटा प्याक अफर ल्याएको छ। टेलिकमले दिउँसोकोे १२ बजेदेखि ३ बजेसम्मका लागि १५ रुपैयाँमा ३ दिनलाई मान्य हुने गरी ३० एमबी र ३० रुपैयाँमा ७..
​भोली शुक्रबार रातिदेखि शनिबारसम्म टेलिकमका मोबाइल सेवा नचल्ने
Posted on Nov 17 2016
काठमाडौं । भोली शुक्रबार रातिदेखि शनिबारसम्म नेपाल टेलिकमका मोबाइल तथा सिडिएमए सेवा प्रभावित हुने भएका छन् । आफ्नो जीएसएम पोस्टपेड सेवालाई कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिस्टममा माइग्रेशन गर्न लागिएकाले मोबाइल..
​नेपाल टेलिकमको नाफा ४ अर्ब १४ करोड, प्रतिशेयर आम्दानी ११० रुपैयाँ
Posted on Nov 15 2016
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले असोजसम्म कम्पनीले ४ अर्ब १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख..
बालाजु उद्यान, राष्ट्रिय सभागृह र हनुमाढोका दरबार क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा
Posted on Nov 11 2016
काठमाडौँ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई सूचना प्रविधिमा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरापलिकाले बालाजु उद्यानलगायतका स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । झन्डै एक वर्ष अघिदेखि रत्नपार्कमा अवलोकन..
​नेपाल टेलिकमको दसैँतिहारका लागि बिशेष छुट
Posted on Sep 29 2016
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दसैँतिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै डाटादेखि एसएमएस सेवासम्म छुटको अफर ल्याएको छ। डाटा अफर जीएसएम तथा सीडीएमएका प्रिपेड तथा पोष्टपेडका ग्राहकले डाटा लिई त्यसमा निःशुल्क भ्वाइस तथा..
टेलिकममा सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारको वर्ष
Posted on Sep 08 2016
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षलाई सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । ग्राहकबाट अत्याधिक गुनासो आएपछि गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिदै सेवा विस्तारको लागि ६७ अर्ब २८..
यूटीएलले अब जीएसएम मोबाइल पनि संचालन गर्ने
Posted on Sep 06 2016
काठमाडौं । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले जीएमएस मोबाइल सहितको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको छ । डेढ दशकअघि लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको भारतीय लगानीको कम्पनी यूटीएल जीएसएम मोबाइल सेवा..
नेपाल टेलिकमको ‘शुभ विहानी–सन्ध्या डाटा प्याक’
Posted on Aug 31 2016
काठमाडौं । बुबाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा नेपाल टेलिकमले जिएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘शुभ विहानी–सन्ध्या डाटा प्याक’ अफर ल्याउने भएको छ । यो अफर भदौ १६ गते बिहान ५ बजेदेखि..
कल वाइपास आरोपितहरूसँग ११ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बिगो माग
Posted on Aug 09 2016
काठमाडौं । मुलुकमा कल वाइपासको अभियोगमा अहिलेसम्म १३५ पक्राउ परेका छन् । कल वाइपासका कारण राज्यलाई अर्बौं क्षति पुगेको भन्दै यी आरोपितहरूसँग ११ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी..
अब २ सय रुपैयाँमा ४ सय मिनेट एनसेलमा कुरा गर्न सकिने
काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकहरुका लागि ‘मासिकभ्वाईस प्याक’ ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ग्राहकले सुलभ शुल्कमा भ्वाईस सेवा लिन सक्छन् । यो योजनाअन्र्तगत ग्राहकले कर सहितमात्र २०० रुपैयाँमा ४०० मिनेट अननेट..
बाढी आउनु अघिनै नेपाल टेलिकमले एसएमएसमार्फत सूचना दिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम बिज्ञान विभागबीच जल तथा मौसमजन्य विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना एसएमएसमार्फत दिने सम्झौता भएको छ । महाकाली, पश्चिम राप्ती, कन्काई, बबई, कर्णाली, नारायणी, बागमती, कोशी..
​नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा छिट्टै फोरजी सेवा सन्चालन हुने
काठमाडौं । सरकारले मोबाइल प्रयोगकर्ताको सुविधाका लागि आगामी असोज महिनापछि नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा ‘फोरजी’ सेवा सन्चालनमा ल्याउने भएको छ । सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी..
अमेरिकाबाट फर्केपछि ‘ठमेल डटकम परीक्षणको सिर्जना हो’
Posted on Jul 08 2016
काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट स्वदेश फर्केपछि परीक्षणका रुपमा सुरु गरेको ‘ठमेल डटकम’ले छोटो समयमा यति धेरै सफलता प्राप्त गर्नेमा बालकृष्ण जोशीलाई विश्वास थिएन । विश्वमा इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपालमा पनि..
​डिश होमको चौधौं सेवा केन्द्र बागलुङमा खुल्यो
Posted on Jun 29 2016
काठमाडौं । डिश होमले चरिकोटमा चौधौं सेवा केन्द्र थप गरेको छ । डिशहोमका नायव महाप्रवन्धक कल्याण अधिकारी तथा प्रवन्धक सविन महर्जनले संयूक्त रुपमा सेवा केन्द्रको उद्रघाटन गरे । काठमाडौंसहित पोखरा, चितवन..
रोबटले लैजानेछ तराईबाट पोखरासम्म सञ्चारका उपकरण र मुस्ताङसम्म नुन
Posted on Jun 18 2016
काठमाडौं। नेपालको समथर तराई भूमिबाट विभिन्न भौगोलिक विकटता र रोकावटलाई पन्छाउँदै रोबोटले पोखरासम्म सञ्चारका उपकरण र मुस्ताङसम्म कसरी नुन बोकेर लैजाला ? सो जिज्ञासा पूरा गर्न रोबोट निर्माता आफूले लामो अध्ययनपछि..
नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटायो, नयाँमा फाइवर केबल निशुल्क
Posted on Jun 15 2016
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवा 'फाइवर टु दि होम' सेवाको दरमा परिमार्जन गरेको छ। यो संगै एफटिटिएच प्याकेज बिक्री वितरण, सिपिइ महसुल तथा अप्टिकल फाइबरको दर घटाएको छ। नयाँ दररेटअनुसार एफटिटिएच..
विश्व मै पहिलो पटक ‘नाइटभिजन’ क्यामरा भएको फोन सार्वजनिक
Posted on Jun 11 2016
एजेन्सी । संसारमै पहिलो पटक नाइटभिजन क्यामरायुक्त फोन सार्वजनिक भएको छ। डेनमार्कको लुमिगोन कम्पनीले ‘टी थ्री’ नामको आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन लन्च गरेको हो। फोनमा ४ मेगापिक्सलको नाइटभिजन क्यामरा रहेको छ। यसको..
सूचना–प्रविधिमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य, चीनसित पनि जोडियो अप्टिकल फाइबर
काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवाका लागि तारयुक्त प्रविधिबाट विश्व सन्जालमा जोडिन भारतको मात्रै भर पर्दै आएको नेपालले अब चिनियाँ बाटो प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ । गत साता जमिनमार्गबाट चीनसँग अप्टिकल फाइबर..
‘फोर्ड हेरिटेज मन्थ’ प्रभावकारी बन्दै
काठमाडौं । फोर्ड गाडीले यो वर्ष ‘फोर्ड हेरिटेज मन्थ’ मनाउने क्रममा फोर्ड र रेसिङबीचको सहकार्य तथा समन्वय प्रभावकारी भएको बताएको छ । यो वर्ष फोर्ड जिटीका गाडी जुन १८ र १९..
युरोकप फाइनल हेर्न फ्रान्स जान पाउने ‘हेलो हुन्डाई ओनर्स’ का विजेता घोषित
काठमाडौँ । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारीक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘हेलो हुन्डाई ओनर्स’ को विजेताको नाम घोषणा गरेको छ। मैतीदेवीका अमित श्रेष्ठ र सामाखुशीका राजेन्द्र गुरुङ लक्की ड्र मार्फत विजेता घोषित..
​एनसेलको पुँजी बृद्धि र नयाँ स्किम रोक्न निर्देशन
Posted on Jun 03 2016
काठमाडौं । पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि विवादमा मुछिएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कानुनबमोजिम शतप्रतिशत पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म उसको पूँजी बृद्धिलगायत कुनै पनि व्यवसायिक प्रस्ताव स्वीकृति नगर्न संसदको अर्थसमितिले सरकारलाई निर्देशन..
​स्मार्ट टेलिकम सेवा ३४ जिल्लामा पुग्यो, केहि समय भित्रै देशभर पुग्ने योजना
Posted on May 27 2016
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले देशका अधिकांश भूभागमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले टावर थप्न थालेको छ । ३४ जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसकेको स्मार्टले केही साताभित्रै काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र..
​ब्रोडलिंकको ब्रोड टिभी आयो अब मोबाईल फोन र ल्यापटपबाट सजिलै हेर्न सकिने
Posted on May 24 2016
काठमाडौं । ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन प्रालिले ‘ब्रोड टिभी’ बजारमा ल्याएको छ । जुन नेपालमा विल्कुलै नयाँ प्रविधि भएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘वान बक्स, जीन्दगी रक्स’ भन्ने नाराका साथ बजारमा..
आइएमई समुहद्वारा अशोक लेल्याण्डको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टर सहित औपचारिक कारोबार सुरु
काठमाडौँ । आइएमई समुहअन्तर्गतको एलटी इन्टरप्राइजेजले गोंगबु, नयाँ बसपार्कमा अशोक लेल्याण्डको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टरको एक समारोहबीच उद्घाटन गरेको छ । ३५००० वर्ग फिट क्षेत्रमा अवस्थित सर्भिस सेन्टरकोे आइएमई ग्रुपका..
​नेपाल टेलिकमले ल्यायो ९० रुपैयाँमा अनलिमिटेड ‘नाइट डाटा प्याकेज’
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अन्तराष्ट्रिय दुरसञ्चार दिवसको अवसरमा ‘नाइट डाटा प्याकेज’ अफर घोषणा गरेको छ । सो अफर मंगलबारदेखि जेठ १८ गतेसम्म जीएसएम प्रिपेड तथा सिडिएमए प्रिपेड तथा पोस्पेडका ग्राहकले..
​नेपाल चीनबीच अप्टिकल फाइबर जोडियो, गल्छीदेखि रसुवाको धुन्चे हुँदै चीनको सीमा रसुवागढीसम्म अप्टिकल फाइबर
Posted on May 13 2016
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले काठमाडौंबाट धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको धुन्चे हुँदै चीनको सीमा रसुवागढीसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्याउने काम सकेको छ । सँगै नेपाल चीन ट्रान्सबोर्डर कनेक्टिभिटी सम्पन्न भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ..
​‘भिन्टेज मोटर एक्स्पो’ ३ दिनसम्म चल्ने, मुख्य प्रायोजक फक्सवागन
काठमाडौँ। जेठ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म हुन लागिरहेको ’भिन्टेज मोटर एक्स्पो’ को मुख्य प्रायोजक फक्सवागन नेपाल भएको छ । नेपालका लागि फक्सवागनको आधिकारीक विक्रेता पूजा इन्टरनेशनल प्रालि हो । ‘नेपालमा अटोमोबाइलको इतिहास..
Results 402: You are at page9of 14